Mmekọrịta Simone Biles na Jonathan Owens: usoro iheomume zuru oke - Ntụrụndụ
Mmekọrịta Simone Biles na Jonathan Owens: usoro iheomume zuru oke
Onye na -eme egwuregwu mmega ahụ kacha ukwuu na nchekwa NFL nwere akụkọ ịhụnanya kacha atọ ụtọ. Nke a bụ egwuregwu emere n'eluigwe, ọ na -ekwu.
Simone Biles na Jonathan Owens zutere otu ọtụtụ di na nwunye na -eme ụbọchị ndị a: na ngwa. Onye na -eme egwuregwu mgbatị egwuregwu Olympic na nchekwa Houston Texans jikọtara tupu ọrịa ọjọọ wee malite, kemgbe ahụ, ewulitela mmekọrịta ịhụnanya nke bụ maka ibuli ibe ha elu.
Ewezuga ịbụ ndị na -eme egwuregwu na -enweghị atụ - onye na -eme egwuregwu mmega ahụ kachasị na oge niile, n'ọnọdụ Biles - ha abụọ ejikọtara ọnụ maka ụdị ọchị ha na ịhụnanya ha nwere maka anụ ụlọ ha. (O nwere bulldogs abụọ; o nwere otu.) Aga m apụta n'ụlọ ya, nkịta ya ga -ekiri ya gburugburu na -achọ nkịta m, Owens gwara Ọnwa Texas N'ajụjụ ọnụ. Ha aghọọla ezigbo enyi.
chrissy teigen egwu egwu american 2016
Biles na Owens bụkwa ezigbo enyi. Nke a bụ egwuregwu emere n'eluigwe, ọ gwasiri ike Ọnwa Texas . O nweghị onye ka m mma. Ọ na -amasị m, ọ na -amasịkwa m. Ahụrụ m nke ahụ n'anya. Na ọ bụ naanị ihe na -egbu egbu ịhụ ka ọrụ ọ na -etinye n'ihe niile.
Lee oge mmekọrịta Simone Biles na Jonathan Owens, n'okpuru.
Biles na Owens jikọtara na Raya obere oge mkpọchi ọrịa malitere. Mana mgbe ha dabara na DM nke ibe ha, Owens aghọtaghị na mbụ na ọ nọ n'ihu ịdị ukwuu. Amaghị m onye ọ bụ, ya gwara Ọnwa Texas na June 2021. Anụbeghị m maka ya, mgbe m gwara ya nke ahụ, nke ahụ bụ otu n'ime ihe masịrị ya.
Ọ gbakwụnyere na usoro iheomume - nke nwere ike ịkwụsị mmekọrịta ahụ tupu ọ malite - nyere ha aka n'ezie ịtọ ntọala. Anyị kwụsịrị ka anyị na -aga n'ihu ozugbo ọrịa ọjọọ, o kwuru. Ọ bụ otu n'ime oge ole na ole n'ime ndụ ya ebe emechiri ihe niile na enweghị ike ime ihe ọ bụla. Ya mere, anyị ji ya na -amata onwe anyị - mara onwe anyị nke ọma. O kere njikọ anyị wee mee ka ọ sie ike. Ugbu a enwere m ekele dị ukwuu.
Biles kwughachiri nke a n'ajụjụ ọnụ mkpuchi ya Ọmarịcha na mbido okpomọkụ a. Ebiwo m, eme njem, emere m ihe m na -enweghị ike ime n'ihi mgbatị ahụ, o kwuru banyere oge ahụ. Enwere m naanị ọchị .
Mgbe ọnwa ole na ole nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị gasịrị, di na nwunye ahụ mere ya Instagram-ukara. Biles biputere foto mara mma nke ha abụọ na ihe odide ya Ọ bụ naanị anyị.
Ka izu ole na ole gachara, ọ na -eso ya na foto ọzọ nke e dere n'okpuru, Naanị oge m ga -ada bụ mgbe ọ nọ ebe ahụ ijide m.
Biles na -eme mpụta mbụ ya na Instagram na nri Owens otu ọnwa ka e mesịrị. Ọ na -edepụta post ahụ, Ugbu a, ị na -ama jijiji.
Biles na Owens na -anọkọ ọnụ ekeresimesi na Afọ Ọhụrụ. Ọ na -adị mma mgbe niile isoro ezinụlọ na -eme ekeresimesi, Owens na -ede n'akwụkwọ akụkọ nke foto ya, nke na -egosi di na nwunye yi pajamas dabara. N'etiti ezumike, Biles na -enwe obi ụtọ na enyi nwoke ọkpụkpọ NFL ya na egwuregwu.
Ike ya bụ ihe, Owens gwara ya Ọnwa Texas . Ọ na -enwe obi ụtọ mgbe niile, na -achị ọchị, na -afụ ụfụ. Ọ bụrụ na m nwere ụbọchị siri ike n'ọfịs, agaghị m achọ iburu ya ụlọ ahụ. Omume ya, mmadụ….
Biles na Owens na -eji ọmarịcha ntọala emebe ụbọchị Valentine, nke juputara na balloons, nnukwu ịhụnanya ịhụnanya, na okooko osisi rose. Ọ dabara nke ọma na ị hụrụ gị n'anya, Biles dere na nkọwa nke foto ya.
Iji mee ncheta afọ otu ha na ụbọchị ọmụmụ 24 nke Biles, di na nwunye ahụ na-aga ezumike ọnụ na Belize. Ahụrụ m gị n'anya karịa ka m hụrụ Belize n'anya na nke ahụ dị ukwuu, Biles dere na Instagram. (Onye na -eme egwuregwu mmega ahụ nwere ikike ịbụ nwa amaala obodo abụọ.) Onye mụ na ya na -eme njem ruo mgbe ebighi ebi, ọ na -ede na selfie ọzọ.
keisi ocha na acha ntutu ntutu echiche agba
N'ime ihe karịrị otu afọ na mmekọrịta ha, Owens mechara nwee ike ịhụ enyi nwanyị ya ka ọ na -asọ mpi na nke mbụ, na asọmpi egwuregwu mgbatị US. (Biles ga-aga n'ihu merie aha ya nke asaa nke mba niile.) Ahụmịhe dị ịtụnanya, Owens dere na Instagram. Oge mbụ ị ga -ekiri ka ị na -asọrịta mpi na mmadụ ma ị mechughị ihu. Ọ dị mma nke ukwuu na m ga -ekiri ka ị na -eme ihe na -amasị gị, wee bụrụ onye kachasị mma na nke ahụ ️ Enwere m nnukwu nganga maka gị lil champ. Ọnwụnwa ga -abịa n'ihu ma ị marala na anọ m !! Hụrụ gị n'anya nwa.
N'ikpeazụ n'ọnwa ahụ, n'oge ule Olympic na St. Louis, Owens na-egosi nkwado ya site n'itinye uwe elu na-ebupụta ihe sitere na Biles. Ọ na -ebutekwa okooko osisi iji mee ememme mgbe o tozuru maka egwuregwu Tokyo.
Instagram: @ jowens_3
Mgbe Biles kwụsịrị ihe omume Olympic abụọ, Owens na -ekerịta nkwado ya na ịhụnanya ya na Instagram. Imma ga -eso gị gafee nwa ọ bụla, ka ọ na -ede. Ike na obi ike gị enweghị atụ na ị na -akpali m kwa ụbọchị SB. Ị na -apụ mgbe niile ka m bụrụ nwa mmeri ma echefula nke ahụ, ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu na enweghị m ike ichere ruo mgbe ị lọtara n'ụlọ m wee hụ ọchị ahụ mara mma ọzọ. Ị ma na m nọ ebe a maka gị nwa.
Biles kwuru na post a, ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu.
Mgbe Biles laghachiri n'egwuregwu Olimpik iji sonye na ngwụcha beam nke ọ bụla, ọ na -enweta nze ọla. Owens na -aga Akụkọ Akụkọ Instagram obere oge ka emechara mmeri ya. Okwu enweghị ike igosipụta etu m siri were m nganga ugbu a, ọ na -ede.
Mmetụta ahụ bụ ibe. Mgbe ọ laghachiri United States, Biles na -akwụsị n'ogige ọzụzụ NFL iji mee enyi ya nwoke obi ụtọ. Omume mmeghe aka kpọbata enyi nwanyị gị ụbọchị ọrụ, ọ na -achị ọchị na Instagram. Owens kwuru na post ya, Obi dị m ụtọ na ị pụtara nwa.
ejiji ụmụ nwanyị na -ewu ewu
N'August 8, Biles kesara foto nke ya site na nleta ọzọ, oge a yi T-shirt OWENS. Ụbọchị ọzọ omume ọzọ ️, o dere n'akụkụ oge na -atọ ụtọ.
N'August 15, di na nwunye ahụ nwere oge ịse foto nke ọdịda anyanwụ.
Mgbe Biles nọ na -ama ụma ruo ọkwa ọzọ n'oge ngwụsị izu ụmụ nwanyị, Owens na -egwu egwuregwu preseason megide ndị ọchị ehi Dallas na Ọgọst 21. Biles kwadoro enyi ya nwoke site n'ebe dị anya, na -ede, Na -ezitere gị ịhụnanya & ezi mmasị site na ezumike a ga m ekele gị. ! Gaa #16! O dere ozi n'akụkụ nseta ihuenyo site na nkata vidiyo ha, maka Ndị mmadụ , na -agbakwụnye, ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu. & yabụ na -anya isi na gị.
N'August 27, Biles kara akara mgbasa ozi Instagram na-akpa ọchị na-eme emume ncheta otu afọ ha. Ee, echefuru m ịgwa gị na anyị na -akpa kemgbe ihe karịrị otu afọ, Biles wepụtara Owens foto ọhụrụ abụọ. Obi dị m ụtọ na afọ 1 gara aga maka ihe kachasị mma metụrụla gị: ME.
Owens kesara akụkọ ya na akụkọ Instagram ya, na -ede, obi m.
A ga -emelite ọkwa a ka ozi ndị ọzọ dị.
super soft t shirts ụmụ nwanyị
echiche ntutu na -acha ọbara ọbara maka brunettes
onye meriri na nzere bachelọ
ogologo oge ole ka ihe na -ejupụta na ntì na -adịru